ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတဲ့လား ...
နံနက် ၄း၄၀ နာရီ
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 4:14 AM
Htar Minn said...
I think they never give back our peoples's power if we don't have struggles and risks.
ဒါကိုတော့ like လုပ်ပေးလိုက်မယ်။
Ko Khin Aye said...
ှုI agree with you KLSwe on this article.
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ကမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ကလကာနောက်က Ideology ဆရာကြီး နေရာတစ်ခုပေးရမယ်
ကျွန်ုပ် NLD ၀န်းထရံ တစ်ယောက်အနေဖြင့်..
ကို ဤနေရာ ပြန်လည် ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ချစ်လှစွာသော အမေနှင့်
ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီး ထင်သလို
လုပ်နေကြသူများ မဟုတ်ကြပါ။ ။
နိမ့်ကျ နေသည်တို့ ကို...
အစိုးရ အား ထုတ်ဖော် ပြသ
ရှိရှိ သမျှလေကုန်သော မဏ္တိုန် များ
နိမ့် ကျ၊ ပြိုလဲ၊ ပျက်စီး နေသည်တို့ ကို
ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ကို
ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ် အခါသမယတွင်..
လတ်တလော အခြေအနေများကို လစ်လျု ရှုကာ၊ လွန်လေပြီးသော ၂၄ နှစ်အကြာကတည်းက...
ညီလေး၊ညီမလေး၊ပူစီ၊ပါပီလေး တို့ တစ်တွေ
နှင့်လမ်းပေါ်က ခွေးဝဲစား..စသည်စသည်..
တို့ပါ မကျန်...အားလုံးကသိပြီးလေသည့်အကြောင်းအရာများကို...
ပြိုလဲနေပါပြီ..အစရှိသဖြင့် လွှတ်တော်ထဲတွင် ဆက်လက် ကုန်းအော် နေကြသည်မှာ...
လမ်းပေါ် ထွက် မကုန်းအော် ခဲ့သမျှ
အတိုးချ ကုန်းအော် နေကြခြင်းသာတည်း။
ုဤနေရာမှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါ၏။ ။
Andrew Soe said...
"လွှတ်တော် ထဲ ကုန်းအော် လို့ ထင်သာ မြင်သာ လူထု အကျိုးပြု ကိစ္စ တစ်ခု ရခဲ့တာများ ရှိရင် သိပါရစေ။ မနေ့က မဟုတ်သော ယနေ့
ဒေါ်စု လက်ပံတောင်း တောင် ကိစ္စ မှာ ပြည်သူ ဘက် မှာ မရှိ ၊ သိန်းစိန် ဘက်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပြီးနောက် ကိုလွဏ်းဆွေ ရဲ့ "အရှောင်အတိမ်း ဂျက်စီဂျိမ်း လုပ်နေကြ" တယ် ဆိုတဲ့ စကားထက် နီနီဝင်ရွှီး ဆိုထားတဲ့ "နဂါးနှိုင်မင်း မဖြစ်ရင် တောင်မှ ကျမ ကို နှိုင်မဲ့ မယားနှိုင်မင်း တော့ဖြစ်မယ် ဧကန်ပင်" ဆိုတဲ့ သီချင်း စာသား က ဒီနေရာ မှာ ပိုသင့်တော်မယ် ထင်တယ်။သူတောင်မှ အဲ့လိုဖြစ်နေရင် နောက်လိုက်တွေဆိုတာ အုတ်ရာရော ကျောက်ရောရော မမြင်ဘူးတာမြင်ရလို့ အားစေးမိနေတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ လူတန်းစား က အများပါလို့ ဆိုပါရစေ။"
" Ideology ဆရာကြီး နေရာတစ်ခုပေးရမယ်"
Just second class in ideology, first class in activist.
Andrew soe တိုင်းရင်းသားလား ဗမာ ကို ပုတ်ခတ်မယ် ဒေါ်စုကိုဝေဖန်မယ်. အဲဒီ အဆင့် မှာဘဲနေ. Ok